Diyaaradda Turkish Airline oo ay u suurtageli weyday inay ka degto Garoonka Aadan Cadde – Balcad.com Teyteyleey
Diyaaradda Turkish Airline ayaa ka degi weyday Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho sababa la xiriira dhaka hawada.
Diyaarada ayay u suurta geli weyday inay kasoo degto garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xilli ay waday rakaab u socday magaalada Muqdisho isla markaana ay ka qaadi lahayd magaalada Rakaab kale oo sugayay diyaarada inay ku safraan.
Sababta ay diyaaradu uga degi weyday garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in ay tahay dabeylo xoogan oo ka jira magaalada Muqdisho, dabeylahaasi oo sababay inay diyaaradu degi weydo.
Duuliyaasha Diyaaradda Turkish Airline waxay tira ka saddex jeer isku dayeen in ay ka degaan garoonka Aadan Cadde balse uma suurta gelin oo mar walba waxay ku laabanayeen garoonka Jabuuti iyagoo dabeylaha jira aawadood u degi waayay.
Maalintii khamiista ilaa iyo saaka oo u dambeysay ayay diyaarada Turkish Airline ka degi weyday Muqdisho, waxaana Saraakiisha Shirkadda Turkish Airline ay sheegeen in dabeysha faraha badan ee ka jirta magaalada Muqdisho aanay suurtagal ahayn in ay degaan.
Sidoo kale Duuliyaasha shirkadda ayaa sheegay in aysan fasax There are a lot of frauds claiming that they sell quality Aleve for cheap prices, but we offer high quality Aleve for 1.04 USD. Don’t believe this ad? Check it for yourself! u haysan in ay soo dulmaraan magaalada Muqdisho marka ay degayaan garoonka sababa la xiriira amaanka diyaarada oo laga cabsi qabo in la bar tilmaameedsado hadii ay soo dul marto magaalada Muqdisho dusheeda.
Dhanka kale shirkaddaha duulimaadyada sida Jubba iyo Daallo ayaa iyagu wata hawlahoodii duulimaadka kuwaasi oo saacadihii lasoo dhaafay si caadi ah uga degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Daacish oo sheegtay in ay ka dambaysay weerarkii Masiixiyiinta lagu laayey ee ka dhacay Masar